Wasiir Khadiijo Diiriye oo lagu heley cadeymo ah shaqaalahii laga eryey Wasaaradda Gargaarka. | Warbaahinta Ayaamaha
Wasiir Khadiijo Diiriye oo lagu heley cadeymo ah shaqaalahii laga eryey Wasaaradda Gargaarka.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka & Maareynta Musiibooyinka Xukuumadda xilgaarsiinta Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa xaqiijiyay in shaqada Wasaaradda Gargaarka laga eryey 16 shaqaale oo ka tirsanaa Wasaaraddaas.
War Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Gargaarka iyo Maraynta Musiibooyinka ayaa lagu sheegay in 16-kii shaqaale ah Wasaaradda looga eryay sifo sharci-darro ah.
Waxaa uu Wasiirka sheegay in shaqaallahaasi ay sii wataan shaqadooda inta ay Caddaalad ka helayaan, islamarkaana dacwad ay ka gudbiyeen wasiirka.